महानगर समाचार | काठमाडौँ महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
Home » सूचना तथा जानकारी » महानगर समाचार
सहरी योजना आयोगको उपाध्यक्षमा बस्नेत नियुक्त
काठमाडौं महानगरको सहरी योजना आयोगमा सरोज बस्नेत उपाध्यक्ष नियुक्त हुनु भएको छ । महानगरको आइतबार बसेको ३३ औं नगर कार्यपालिका बैठकले बस्नेतलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको प्रबक्ता ईश्वरमान डंगोलले जानकारी दिनुभयो । बस्नेत यस अघि आयोगको सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो । गएको चैत २४ गते सम्पन्न महानगरको चौथो नगर सभाले स्वीकृत गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम उहाँलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो । ऐनले आयोगको अध्यक्ष महानगरको प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । बैठकले पाकिस्तानको इस्लामावाद नगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ ।
बैठकमा प्रहरीसँगको साझेदारितामा सहरमा राखिने सिसिटिभि क्यामरा जडान गर्न थप २ करोड ८१ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यस अघि यही कार्यक्रमका लागि ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ ।
बैठकका अध्यक्ष एवं महानगरका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले — वडाका योजना कार्यान्वयन गर्दा महानगरसँग समन्वय गर्न वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । महानगरको सन्तुलित र योजनावद्ध बिकासका लागि आगामी नगर सभामा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव वडा समितिबाट अनुमोदन गरेर समयमा नै पठाउनोस्, मेयर शाक्यले थप्दै भन्नुभयो — धेरै काम वडाबाटै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो । वडाबाटै काम भए पनि केन्द्रमा जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ ।
बैठकमा प्रमुख शाक्यले जेठ २२ स्मार्ट टेक्नोलोजी कम्पिटिसनको समापन कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी गराउनुभएको थियो ।
बारा पर्साका हुरी प्रभावितलाई महानगरको सहयोग रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा
काठमाडौं महानगरपालिकाले बारा र पर्सा जिल्लाका हावाहुरी प्रभावितलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत सहयोग रकम प्रदान गरेको छ । बुधबार महानगरका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर ४० लाख ३१ हजार ४१३ रुपैयाँ ९५ पैसाको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । यस रकममा महानगरकोतर्फबाट २५ लाख रुपैयाँ र बाँकी रकम जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीकोतर्फबाट १ दिनको पारिश्रमिकबाट संकलन गरिएको हो । रकम हस्तान्तरण अवसरमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइराला पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
गएको २१ गते महानगरको सभा कक्षमा बसेको कार्यपालिकाको ३१ औं बैठकले हावाहुरीबाट प्रभावितलाई सहयोग रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा प्रमुख शाक्यले, महानगरले सम्पादन गरिरहेका तथा आगामी योजनामा रहेका कार्यक्रमका बिषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
“ई—डायरी”को अवधारणामा सहरी योजना आयोग
काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले कर्मचारीहरुको दैनिक कामको अभिलेख र सम्पादन गरिरहेको कामका विषयमा जानकारी राख्न “ई—डायरी” कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने अवधारणा अघि सारेको छ । सहरी योजना आयोगमा यो प्रणाली परीक्षण भइसकेको छ । यसबाट कर्मचारीका नियमित कामबाहेक अन्य कुन कुन काम भए? भेटघाट र छलफल के—के भए? भ्रमण र प्रतिनिधित्व कहाँ भयो भन्ने कुराको अभिलेख तयार हुन्छ । यसबाट कसलाई कस्तो कार्यभार छ? कहाँ कति जनशक्तिको आवश्यकता छ, जस्ता विषयमा निर्णय गर्न गराउन सजिलो हुन्छ । बिहीबार महानगरको सभा कक्षमा प्रस्तुतीकरण गर्दै सहरी योजना आयोगका सदस्य सचिव सरोज बस्नेतले भन्नुभयो — यस सम्बन्धि कार्यविधि कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।
प्रस्तुतीकरण सुनिसकेपछिको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले, प्रणाली परिपक्ब बनेपछि यसका विषयमा बोल्ने बताउनुभयो ।
महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सहसचिवहरु, विभागीय प्रमुख, वडा सचिवका बीच गरिएको प्रस्तुतीकरणमा सदस्य सचिव बस्नेतले प्रणालीका विषयमा जानकारी दिँदै थप्नुभयो — यो हरेक कर्मचारी आफैंले विवरण भर्ने प्रणाली हो । यसलाई मोवाइलबाटै भर्न सकिन्छ । यो भर्न कम्तीमा २ मिनेट र बढीमा १५ मिनेटसम्म लाग्न सक्छ । फेसबुक चलाउन जस्तै सजिलो यस प्रणालीमा आफू सहभागी भएको कार्यक्रमको फोटो, त्यससँग सम्बन्धित कागजपत्र र आफूसँग सहभागी भएका अन्य २ जना सहभागीको परिचय खुलाउनुपर्छ ।
प्रस्तुतीकरण सुनिसकेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाले — प्रणालीलाई व्यवहारिक, विश्वसनीय र आवश्यक पर्ने सबै जानकारी प्राप्त हुने ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो भने सहसचिव डा. टोकराज पाण्डेले — परीक्षणसिद्ध भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो । यो प्रणाली कर्मचारी भरेपछि कसकसले हेर्न पाउने हो? त्यसमा भरिएका विवरण कसरी प्रयोग हुने हुन्, प्रणालीको विकासकै क्रममा उत्तर खोज्नुपर्ने सहसचिव भरत अर्यालले बताउनुभयो ।
सहरी योजना आयोगले तयार पार्दै गरेको यो प्रणाली सूचना प्रविधि विभागलाई हस्तान्तरण हुनेछ । यसमा विभागीय प्रमुख, वडा सचिव, इञ्जिनियरहरु र अधिकृत स्तरका कर्मचारीले काम सकेको भोलिपल्ट बिहान ०९ बजेभित्रमा विवरण भरिसक्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस अवधिमा विवरण नभरे त्यसदिनका लागि प्रणाली आफैं निष्क्रिय भएर जानेछ ।
“स्मार्ट सहरी प्रविधि प्रतिस्पर्धा – २०७५” को औपचारिक शुरुवात्
सहरी समस्याको प्रविधिमा आधारित समाधान खोज्ने प्रयासमा महानगर
काठमाडौं । विद्यमान सहरी समस्यालाई प्रविधिमा आधारित नयाँ सोचबाट समाधान खोज्ने क्रममा काठमाडौं महानगरले बुधबारबाट “स्मार्ट अर्बन टेक्नोलोजी च्यालेन्ज २०१८— स्मार्ट सहरी प्रविधि प्रतिस्पर्धा – २०७५” कार्यक्रम शुरु गरेको छ । समुदाय तथा वातावरण, सहरी पूर्वाधार बिकास, सामुदायिक सेवा र सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन ४ क्षेत्र प्रतिस्पर्धाका मुख्य विषय हुन् । अवसरको अभावका बिकल्प सोचेर बसिरहेका युवाहरुलाई स्वदेशमा नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाउन उद्यमशीलता प्रबद्र्धन गर्न सक्ने सामुहिक प्लेटफर्मका रुपमा कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । “हाम्रो काठमाडौं, हामी बनाउँछौं” नारा दिइएको “स्मार्ट सहरी प्रविधि प्रतिस्पर्धा – २०७५” को शुभारम्भ गर्दै महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले — “काठमाडौं च्यालेन्ज डट ओआरजि” वेभपेज सार्वजनिक गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रमुख शाक्यले भन्नुभयो — हामीले अधिकांश समय स्मार्ट शव्दको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं । यो शव्द सहर बनाउने कुरामा मात्र होइन, व्यक्ति—व्यक्तिमा पनि स्मार्टनेसको कुरा आउँछ । धेरै समयको तयारी पछि सहरी समस्याको समाधान खोज्न सहरी योजना आयोगमार्फत नयाँ सोचको खुल्ला छलफल गर्ने थलो बनाएका छौं । यसले विकासमा सहभागिता, साझेदारिता बढाउँछ र प्राप्त उपलब्धीमा दायित्व बोध गराउँछ । प्रमुख शाक्यले — सहरी समस्या समाधानमा यसो गर्न पाए हुन्थ्यो वा म त्यो ठाउँमा पुगेको भए यसो गर्थें भनेर सोच्नेहरुलाई सोच लिएर आउन आग्रह गर्र्नुभयो । कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा श्रेष्ठ खड्गीले — महानगरको कार्यक्रमले युवाहरुलाई देशमै केही हुन थाल्यो भन्ने सन्देश सञ्चार हुने विश्वाश व्यक्त गर्नुभयो । हामी जिम्मेबार भएर काम गर्न खोजिरहेका छौं, उपप्रमुख श्रेष्ठ खड्गीले थप्नुभयो — हाम्रो काममा सहभागी हुन चाहने सबैलाई खुल्ला आमन्त्रण गर्दछौं ।
प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्छ, ऊ स्वदेश वा विदेश जहाँबाट भए पनि भाग लिन सक्छ । सहभागिताका विषयमा जानकारी दिँदै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाले — सरकारी तहबाट यो पहिलो प्रयास भएको उल्लेख गर्नुभयो । संघ सरकारले पनि यसप्रकारका कामका लागि रकम छुट््याएको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि महानगरको प्रयास सिकाइ बन्न सक्छ, यहाँको भनाइ थियो ।
यस प्रकारका प्रतिस्पर्धाहरु निजी क्षेत्रबाट अभ्यास भएका छन् । बिदेशमा पनि यस्ता कार्यक्रम आयोजना हुन्छन् । तर हामी बिदेशी ढाँचाको होइन नेपाली समाज, यहाँको भूगोल र आवश्यकता अनुसारका सोच चाहन्छौं, कार्यक्रममा महानगरको सहरी योजना आयोगका सदस्य सचिव सरोज बस्नेतको भनाइ थियो । प्रतिस्पर्धाबाट साधारण तर नौला र केही जटिल तर सम्भब हुने गरी दुई किसिमका प्रविधिहरुको अपेक्षा गरिएको छ, सदस्य सचिव बस्नेतको भनाइ थियो । प्रतिस्पर्धाको शुरुवात्मा एउटै समूहले धेरै सोच दर्ता गर्न सक्छन् । पछि एउट समूहको दुई वा त्योभन्दा धेरै सोच छनौटमा परे भने उनीहरुले अन्त्यमा एउटा मात्र सोच रोज्नुपर्छ । यङ् इनोभेसन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विभुषण बिष्टले जानकारी दिनुभयो । यस प्रतिस्पर्धामा इनोभेसन्ससँगै नेपाल बिज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, दायित्व, अन्तर प्रेरणा, ग्लोवल इन्टरप्रेनरसिप नेटवर्क, कारखाना र किन्स कलेज नोलेज पार्टनरका रुपमा सहभागी छन् ।
प्रतिस्पर्धाबाट आएका सोचबाट काठमाडौंका सहरी समस्या पहिचान हुने र ती समस्याको समाधानमा प्रविधिमैत्री उपाय पत्ता लाग्नेछन् । प्रविधि, ज्ञान र सीपका माध्यमबाट महानगरको समग्र क्षेत्रको परिवर्तनका लागि प्रविधिमैत्री आधार तयार हुनेछ । महानगरले प्रतिस्पर्धाबाट यसप्रकारका प्रतिफलको अपेक्षा गरेको छ । त्यस्तै महानगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवामा चुस्तता एवं पारदर्शिता कायम हुने र सामाजिक न्यायमा आधारित सुविधा वितरणमा सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ ।
प्रतिस्पर्धाका मूख्य ४ विषय र त्यसभित्र पर्ने २८ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीले नविन सोच प्रस्तुत गर्नेछन् । ६ चरणमा सम्पन्न हुने प्रतिस्पर्धामा सोच छनौट गर्दा बिषयको महत्व, उत्पादन क्षमता, ब्यवसायिक नमूना, बिस्तार योग्यता र प्रस्तुति एवं ब्याख्या गरी छुट्टाछुट्टै पाँच आधारलाई सूचक मानिएको छ । तोकिएको मापदण्ड अनुसार मुल्यांकन गरी कुल अंकमध्ये सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने समूह बिजेता बन्नेछ ।
पहिलो चरणमा कम्तीमा १०० वटा नविन सोच भएका युवाहरुको समूहहरुलाई छनौट गरि बिज्ञ समूहबाट करिब ३ महिना नियमित तालिम दिइनेछ । तीमध्ये ४ विषयका २४ समूह प्रतिस्पर्धी अन्तिम चरणमा पुग्नेछन् । उनीहरुलाई प्रदान गरिने विशिष्ट प्रकारको तालिमबाट सोचमा निखार ल्याइनेछ ।
सोच आउँदो पुष ३० गतेभित्र वेभपेजमार्फत दर्ता भइसक्नुपर्नेछ । यो प्रतिस्पर्धा ६ महिना लामो हुनेछ ।
उत्कृष्ट सोचलाई अर्थात् च्यालेन्जको विजेतालाई पाँच लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । यो पुरस्कारबाट उत्कृष्ट मानिएको सोचलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने महानगरको लक्ष्य हो । त्यस्तै प्रतिस्पर्धाका ४ वटा विषयगत विजेतालाई प्रति समूह २ लाख रुपैयाँ र उपबिजेतालाई जनही १ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ ।